Dood la xiriirto ka hortagga musuq maasuqa oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Dood la xiriirto ka hortagga musuq maasuqa oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO”
Dood cilmiyeed ku saabsan sida loo baabi’in karo Musuq maasuqa oo ay ka qaybgaleen Aqoonyahanno ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dood cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabiyeen Midowga Ardayda Jaamacadda Soomaaliya, ayaa looga dooday sida looga hortegi karo saameynta musuq maasuqa uu ku yeelanayo bulshada iyo dhibaatooyinka uu ku leeyahay jiritaanka musuq maasuqa.
Dadkii ka qeyb galay madasha ayaa si wada jir ah u sheegay in siyaabaha looga hortegi karo musuqa ay tahay in si wada jira ah looga hortago, meelna looga soo jeesto ciribtirka musuqa, in adkeeyo sharciga ka hortagay musuq maasuqa oo gacan bir ah lagu qabto cidkasta oo falkaasi ku guda jirta iyo in shacabka loo sameeyo wacyigelin arrintan la xiriirta.
Ugu dambeyn ka qeyb galayaasha ayaa si wada jir ah isugu afgartay in hal meel looga soo wada jeesto musuq maasuqa.
Ciidanka Xoogga dalka oo kaalmo gaarsiiyay dadkii ay saameeyeen fatahaadaha
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis gaar ah oo ku saabsan isticmaalka dayax-gacmeed loo adeegsado arrimaha isgaarsiinta “SAWIRRO”
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis gaar ah oo ku saabsan isticmaalka dayax-gacmeed loo adeegsado arrimaha isgaarsiinta "SAWIRRO"